Gandaki Sanchar » एक पैसा नलाग्ने सरकारी नियम, लाखौं उठाउने म्यानपावर
एक पैसा नलाग्ने सरकारी नियम, लाखौं उठाउने म्यानपावर
म्यानपावर वा एजेण्टले खाडीका विभिन्न देश र मलेसियामा जाने कामदारहरु सँग चर्को रकम असुल्ने गरेको पाईएको छ । म्यानपावरहरुले राम्रो काममा जान पैसा पनि धेरै लाग्छ भनेर रकम असुल्ने गरेको पाईएको हो । यदि तपाईंलाई म्यानपावर वा एजेण्टले खाडीका विभिन्न देश र मलेसियामा राम्रो काम छ, राम्रो काममा जान पैसा पनि राम्रो लाग्छ भनेर फकाइरहेका छन् भने उनीहरुको चिल्ला कुरामा विश्वास नगर्नुहोस् ।
सुनसरीका २६ वर्षीय नविन उराव यूएईमा सुरक्षा गार्ड कामका लागि काठमाण्डौको वसुन्धारामा रहेको सब–इन्टरनेशनल म्यानपावर कम्पनीमा पुग्नुभयो ।
म्यानपावरले नविनलाई नेपाली एक लाख रुपैयाँ तलब हुने र त्यसका लागि पाँच लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने भन्यो । नविनले गएको साउन अन्तिम साता म्यानपावरलाई भनेजति रकम बुझाउनुभयो ।
भदौ चार गते सामान्य अन्तर्वार्ता भयो । उहाँ पास पनि हुनुभयो । अन्तर्वार्ता भएको दुई दिनमै नविनलगायत पाँच जनालाई कम्पनीले सुरक्षा गार्डको लागि यूएई पठायो । तर यूएई पुगेपछि कम्पनीले फेरि सबै जनाको परीक्षा लियो । तर नेपालमा पास भएकाहरु त्यहाँ फेल भए । त्यसपछि सबैलाई अयोग्य भनेर नेपाल फर्काइयो । त्यति धेरै रकम बुझाएर यूएई पुगेका पाँचै जना अहिले निराश छन् ।
नेपाल प्रहरीमा १६ वर्ष सेवा गरेर हवल्दारबाट अवकास हुनुभएका नवलपरासीका दिपक आचार्य (परिवर्तित नाम) ले पनि सुरक्षा गार्डको जागिर खान यूएई जानको लागि अढाई लाख रुपैयाँ तिर्न तयार हुनुभयो । दाङका रम्तुल्ला मियाँ भन्ने एजेण्टले सिनामंगलमा रहेको जीएस टेक्निकल सेन्टरबाट उहाँलाई विदेश पठाउने भने । एजेण्टले ४ दिनको सेक्युरिटीको तालिम पनि दिन लगाए । गएको असार ३१ गते उहाँले एजेण्टलाई रकम बुझाउनुभयो । साउन ५ गते फ्लाइट छ भनेको थियो तर ४ गतेदेखि नै एजेण्टको मोबाइल स्वीच अफ भयो ।
सिन्धुलीका सन्तोष कार्कीले पनि सुरक्षा गार्डमा जानका लागि २०७५ बैशाख ३ मा सेभेन हिल्स म्यानपावरलाई तीन लाख रुपैयाँ बुझाउनुभयो । उहाँले अल अबयाद सेक्युरिटी सर्भिसेज् कम्पनीमा सुरक्षा गार्डको काम गर्ने र मासिक २५ सय दिर्हाम तलब पाउने गरी करार सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले नै खाने बस्ने सुविधा दिने करारमा उल्लेख थियो । तर उहाँले तीन महिनासम्म काम गर्दा जम्मा १ हजार ८ सय दिर्हाम पाउनुभयो ।
नविन, दीपक र सन्तोषजस्तै यूएईमा सुरक्षा गार्डमा जानको लागि सुर्खेतका रमेश भण्डारी (परिवर्तित नाम) ले पनि म्यानपावरलाई लाखौँ रकम बुझाउनुभयो । यूएईको स्पार्क सेक्युरिटी कम्पनीमा सुरक्षा गार्डको रुपमा जान सपोर्ट ह्युमन रिसोर्स प्रालिलाई गएको मंसिरमा अढाई लाख रुपैयाँ बुझाएको रमेश भण्डारीले बताउनुभयो ।
१५ दिनमा आउँछ भनेको भिसा दुई महिना बित्न लाग्दा पनि नआउँदा रमेश अब के गर्ने भन्दै दोधारमा हुनुहुन्छ ।
सुरक्षा गार्डमा यूएई जान किन मरिहत्ते ?
नेपालमा सुरक्षा गार्डको काम गर्न नचाहने तर लाखौँ रुपैयाँ तिरेर त्यही सुरक्षा गार्डमा यूएई जान चाहने धेरै हुन्छन् । त्यहाँ सुरक्षा गार्डको मासिक तलब पचास हजारदेखि एक लाखभन्दा माथि हुन्छ । यही कमाइको आशामा धेरै नेपालीहरु सुरक्षा गार्डमा यूएई जान मरिहत्ते गर्छन् । कोही साथीभाइको प्रगति देखेर त कोही म्यानपावरको कुरा सुनेर सुरक्षा गार्डमा यूएई जान तम्सिन्छन् ।
यूएईमा सुरक्षा गार्डमा गएर राम्रो कमाइ गरिरहेका गाउँका एकजना दाइबाट प्रेरित भएर रमेश भण्डारीले आफू पनि सुरक्षा गार्डमा नै यूएई जाने सोच बनाउनुभयो ।
‘यूएई गएको दुई वर्षमै त्यो दाइले गाउँमा तीन तले पक्की घर बताइसक्नुभयो । कमाइ एक लाखभन्दा बढी छ भन्नुहुन्थ्यो ।’ रमेशले आफू पनि सुरक्षा गार्डमा यूएई जान चाहनुको कारण बताउनुभयो ।
यस्तै, प्रहरीको हवल्दारबाट अवकाश पाउनुभएका दिपक आचार्यले पनि अवकासपछि बाँकी जीवन केही गरौँ भनेर नै सुरक्षा गार्डमा यूएई जाने सोच्नुभयो । नेपालका अवकासप्राप्त सेना, प्रहरीलाई यूएईका चलेका सेक्युरिटी कम्पनीमा सुरक्षा गार्डको काम सजिलै पाइन्छ भन्ने सुन्नुभएको थियो । कमाइ पनि मनग्गे हुने भन्ने थाहा पाएपछि दीपकलाई पनि एकपटक यूएई जानैपर्ने लाग्यो ।
‘१६ वर्ष प्रहरीमा सेवा गर्दा दैनिक गुजारा चलाउनबाहेक अरु केही प्रगति भएन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘केही प्रगति हुन्छ कि भनेर यूएई जान खोजेको ।’
यस्तै, यूएईमा सुरक्षा गार्डमा जानको लागि ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लाग्छ भन्ने सुनेका सुर्खेतका रमेशलाई भने म्यानपावरले अढाई लाख रुपैयाँ मात्र लाग्छ भनेपछि झनै उत्साहित बनायो । ‘मेरा साथीहरु त उहिले पाँच लाख रुपैयाँ तिरेर गएका थिए, मलाई त अढाई लाख मात्रै लाग्छ भने पछि सस्तोमा जान पाइने भयो भन्ने सोचेको थिएँ’, उहाँले भन्नुभयो ।
राम्रो काममा जानको लागि बाध्य भएर आफूहरुले बढी पैसा बुझाएको रमेश बताउनुहुन्छ, ‘जाउँ भने बढी रकम बुझाउनुपर्ने र बढी रकम नबुझाउँदा जान नपाइने ।’
आकर्षक मानिने सबै काममा म्यानपावरको लुट ?
सुरक्षा गार्ड मात्र होइन, ट्याक्सी ड्राइभर, कुक र पाँचतारे होटेलमा आकर्षक जागिर मानिने विभिन्न प्रकारका कामको लागि म्यानपावरले मनलाग्दो रकम असुल्ने गरेका छन् ।
यूएईमा ट्याक्सी ड्राइभरको लागि कामदार मागेको छ भन्ने थाहा पाएर रामेछापका नकुल भट्टाराई गएको मंसिर महिनामा नयाँ बानेश्वरमा रहेको अल जराफा ह्युमन रिसोर्स म्यानपावर पुग्नुभयो । तर म्यानपावरले सुरुमै दुई लाख रुपैयाँ लाग्ने भनेपछि उहाँ फर्किनुभयो ।
‘सरकारले फ्रिभिसा, फ्रिटिकट भनेको भएर म बुझ्न गएको थिएँ । तर त्यत्रो पैसा लाग्छ भन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘आखिर फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा कामदार पठाउने म्यानपावर कहाँ छन् ?’
कानुनी व्यवस्था के छ ?
वि.सं.२०७२ असार २६ गतेबाट नेपाल सरकारले फ्रिभिसा, फ्रिटिकटको व्यवस्था सुरु गर्‍याे त्यो व्यवस्थाअनुसार खाडीको ६ देश (कतार, साउदी, यूएई, कुवेत, बहराइन, ओमान) र मलेसिया गरी सात देशमा कामदार पठाउन १० हजार रुपैयाँमात्र लिने मिल्ने व्यवस्था लागू भयो । भिसा र आतेजाते हवाइयात्राको खर्च सबै रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्ने गरी यो व्यवस्था लागू भएको थियो ।
यो व्यवस्थापछि मलेसियालगायत खाडीका सबै देशमा रोजगारीका लागि जुनसुकै काममा गए पनि पैसा नलाग्ने बताउनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता भोलानाथ गुरागाईँ ।
‘यदि वैदेशिक रोजगारीमा गएको हो भने चाहे त्यो म्यानेजर पदमा हो वा निर्माणको कामका लागि हो, सबै निःशुल्क हुन्छ,’ गुरागाईँले भन्नुभयो, ‘सेवा शुल्क वापत १० हजार रुपैयाँबाहेक कुनै पनि शुल्क लाग्दैन र लिन पनि पाउँदैन ।’
नेपालबाट श्रमिक पठाउने विषयमा नेपाल सरकारले मलेसिया र यूएईसँग अलग्गै समझदारी पनि गरेको छ । समझदारीमा नेपालबाट जुनसुकै क्षेत्रमा कामदार पठाउँदा शून्य लागतमा जान पाउने, म्यानपावरको सेवा शुल्क पनि रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने र बिमाको व्यवस्थासहित सामाजिक सुरक्षाको पनि ग्यारेण्टी हुने व्यवस्था रहेको छ ।साभार–उज्यालो अनलाईनबाट
प्रकाशित मिति ९ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ०९:२९